Chikunguru 31, 2018 arun
Wenyika 3rd pakukura kubhengi nyaya munda chikwereti chikwereti pamusoro blockchain
In chinokosha budiriro kudzamisa ari kuchinja zvinhu zvikwereti mogeji, ari Agricultural Bank of China (ABC) yakaratidza kuti akapa munda chikwereti hwakakodzera $300,000 pamusoro blockchain pakati pekuidzwa. Mubhengi akashandisa chidimbu zvokurima nyika sezvo rubatso kuti ape chikwereti chikwereti. It Vaigoverawo nezvokuzadziswa chikwereti mhiri raiva pedyo nebundu vakaroorana zvakadai yezvokutengeserana mabhanga, Guizhou raMwari Land uye Resources Bureau, uye People wacho Bank of China.
ABC itsva blockchain mhinduro, E-Blockchain chikwereti, inotsidza mumwoyo kunzwisisa kwakaita chikwereti kwacho. Mubhengi akati kuitika chikwereti tendero kwacho kunosanganisira vanozoshanda pamatanho ose, izvo zvinotora masvondo, kana mwedzi, vasati achibvumirana anogona anokwereta. Disintermediation aigona kuponesa zviuru zvemadhora kuti ABC uye zvimwe zvinobatanidzwa mapato kusava mari chakakonzerwa namaneja kubva pamutemo mari kuti kuratidza mari. ABC akasimbisawo kuti nokukurumidza chokuwedzera zvayo blockchain chichapedza nokupinza dzimwe loanable zvinhu, kusanganisira Real Estate.
Coinsquare anoisa chikamu kubatsira vatengesi vanopedzisira blockchain, crypto, & AI Tech
Canada-inobva crypto Exchange Coinsquare yakatanga bazi idzva rinonzi CoinCapital. The chikamu yave vakanyorwa pamwe Ontario kuchengetedzeka Commission somunhu siyiwa musika munyengeri, Portfolio maneja, uye inivhesitimendi Fund maneja. Bazi idzva ichapa vanoshandisa siyana mari mabasa wokurarama kumativi blockchain, cryptocurrencies, chakagadzirwa njere (AI), uye nezvimwe itsva ruzivo.
Coincapital CEO Lewis Bateman yakati:
"Pane havi yakasimba kuti makambani kuwana kukura mune zvemichina zvekutepfenyura, asi kwete zvakakwana specialized kana niche zvinopiwa iripo kwavari… Tiri panguva yakaoma inzwi pfungwa iri zvemichina zvekutepfenyura uye Coincapital iri zvakakwana papi, akapiwa ukama varo Coinsquare uye zvakadzika chikamu unyanzvi, kushandisa inotevera chokutambudzika indasitiri kukura.” Coinsquare ndomumwe makurusa crypto exchanges muCanada & inopa zvokutengeserana negadziriso Bitcoin, Litecoin, Doge, uye nevamwe.
Thomson Reuters vadyidzani CryptoCompare nokuda cryptocurrency Data
Thomson Reuters, mumwe munyika vaitungamira nhau uye ruzivo basa kumisika nyanzvi, akaita partnered pamwe CryptoCompare - yose cryptocurrency musika date aggregator – kupa umboo ayo Eikon zvemari papuratifomu. Under sungano itsva, CryptoCompare achaita nokusangana murayiro bhuku uye zvokutengeserana Data nokuda 50 crypto-midziyo, sourced kubva-siyana exchanges, kupinda Eikon pakombiyuta pachikuva - a customizable chishandiso chinobatsira vanoita & vatengesi nokuvapa-zvechokwadi nguva uye nhoroondo pamusika Data.
CryptoCompare ndehwokuti kupa yakarurama & yakavimbika musika Pricing uye mashoko ari pamusoro 5,000 mari uye zviratidzo uye pamusoro 200,000 Currency maviri uyewo cryptocurrency dzaishandiswa Data, murayiro bhuku date, chinogumbura aiongorora date nemagariro mashoko, & chibvumirano itsva kuchabatsira Eikon vanoshandisa vawane zvose uchida kunzwisisa musika mutengo kufamba uyewo misoro muchidimbu musika.
Bitmain akaita $ 1.1B mu mubereko kuti Q1 2018 & anoronga pakudimurisa IPO Nokukurumidza
Bitmain anotarisira kuwana madhora maviri kusvika mabhiriyoni matatu mubereko kuti 2018. A KPMG odhita ramambo yakashuma kuti Bitmain anobudiswa $1.2 bhiriyoni mumumbure purofiti ine 50% mambure kumahombekombe ari 2017. In wokutanga chikamu 2018, Bitmain anonzi akauyisa $1.1 bhiriyoni mumumbure purofiti.
The co-CEO pamusoro Bitmain Technologies, pakukura kambani cryptocurrency mugodhi kwenyika, Jihan Wu akati Bitmain anoronga kuitisa kwokutanga chinopiswa paruzhinji kuHong Kong, kana ari mhiri musika pamwe US ​​Dollar-denominated mugove. wo, Bitmain ari anonzi kurera mimwe mari kuwedzera $ 400M kumativi akakurira June. The mari itsva kuti kukoshesa Bitmain panenge $14 bhiriyoni, zvichiratidza munhu 10 kuti 11x zvakaoma akawanda. Uyu 16.6% kuwedzera kubva chekambani kupfuura vachangobva rakashuma $12 bhiriyoni uchimutarira.
GUNYANA 2019 Will Be BITCOIN...